တင်းတိတ်နဲ့ အမဲစက်တွေကို သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ Bye Bye လုပ်ကြပါစို့
17 Jul 2018 . 3:55 PM
လူတိုင်းအတွက် ခန္ဓာကိုယ်မှာ သိသာထင်ရှားတဲ့အစိတ်အပိုင်းက မျက်နှာဖြစ်တာမို့ မျက်နှာအသားရေကို တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေထက်ပိုပြီး ဂရုစိုက်ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်။ ခရီးထွက်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါ တချို့က Beauty Saloon တွေ ဒါမှမဟုတ် ခေတ်မီအလှကုန်တွေသုံးကာ မျက်နှာမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ နေလောင်ကွက် ၊ တင်းတိတ် နဲ့ မှဲ့ခြောက်တွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေလုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ နေလောင်ဒဏ်ခံထားရတဲ့ အသားအရေကို ပိုက်ဆံမကုန်ဘဲ သဘာဝနည်းနဲ့ ကုသလို့ရတဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာ ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်။
(၁) ရှောက်သီး (ဒါမှမဟုတ်) သံပရိုသီးကို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ရှောက်သီးမှာ အသားရေကို ဖြူအောင် ချေးချွတ်ပေးနိုင်တဲ့ Citric Acid ပါဝင်တာမို့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီနည်းလမ်းလေးက အသုံးဝင်မှာပါ။ အသုံးပြုပုံကတော့ ရှောက်သီးကို ညှစ်ပြီး ရလာတဲ့ အရည်ကို နူးညံ့တဲ့ အ၀တ်စလေးတစ်ခု နဲ့ မျက်နှာပေါ်ကို တို့ပေးပါ။ တစ်ပတ်ကို (၃)- (၄)ကြိမ်ခန့် ပုံမှန်လေး လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့တင်းတိတ်နဲ့ နေလောင်ကွက်တွေ သိသိသာသာပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော်။
(၂) ကြက်သွန်နီနဲ့ မျက်နှာအသားရေထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုရင် အံ့သြသွားမလား. နေလောင်ကွက်တွေအတွက် ကြက်သွန်နီက တကယ်ကို ထိရောက်တဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတစ်ခုပါ။ ပျားရည် နှစ်ဆနဲ့ လှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်နီကို တစ်ဆ ရောစပ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲကို ထည့်ထားပါ။အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုထိ ထားပြီးရင်တော့ အဲ့ဒါနဲ့ မျက်နှာအသားအရေပေါ် မလိမ်းခင်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ အမဲစက်တွေကို(၁၅)မိနစ်ခန့် အရင်ဆုံးလိမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလေးကိုတော့ တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ်ထိ လုပ်နိုင်ပါတယ်နော်။
(၃) ခရမ်းချဉ်သီး ကို အသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုလည်း ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးဟာ အသားအရေကို ဖြူဝင်းစေနိုင်တဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးပါဝင်တာကြောင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတောင် ခရမ်းချဉ်သီးကို အခြေခံပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး အလှကုန်တွေရှိနေတာပါ။ အသီးအနှံတွေထဲမှာ အစွမ်းထက်တဲ့ခရမ်းချဉ်သီးအစွမ်းကိုတော့ လျစ်လျုရှုထားလို့တော့မရပါဘူးနော်။ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးတွေနဲ့ မျက်နှာပေါ်က အမဲစက်တွေရှိရာ သုတ်လိမ်းထားပြီး (၁၀)မိနစ်လောက်တော့ ထားပေးရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်ကို (၃)-(၄)ကြိမ်လောက်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
(၄) သဘာဝဆေးဖက်ဝင်တဲ့ အဆီအနှစ်တွေထဲမှာ မက်မန်းသီးမျိုးနွယ်ဝင် မက်မွန်းသီးကနေတစ်ဆင့်ရလာတဲ့ အဆီကလည်း နေလောင်ကွက်တွေနဲ့ တင်းတိတ်အမဲစက်တွေကို ကုသလို့ရပါတယ်။ မက်မွန်သီးအဆီမှာ Vitamins A ၊ B2 ၊ B6 ၊ D နဲ့ E အပြင် အံ့အားသင့်ဖွယ်အစွမ်းသတ္တိတွေပါဝင်နေတာမို့ မျက်နှာပေါ်မှာဖြစ်စေ လက်ပေါ်မှာဖြစ်စေ အမဲစက်တွေရှိရာကို အစက်လေးနှစ်စက်ချကာ Lotion လိုပဲ လိမ်းလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေမဆေးချပဲည အိပ်ရာဝင်လိုက်ပါ။ အိပ်ရာမ၀င်ခင် ညတိုင်း ပုံမှန်လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ တကယ့်ကို အစွမ်းပြလာမှာသေချာပါတယ်။
(၅) ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသား အိမ်တွင်းကုထုံးလေးဖြစ်မှာပါ။ ဒိန်ချဉ် ၊ နွားနို့ စတဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေဟာ အသားအရေအတွက် ဘယ်လောက်ထိအထောက်ပြုလဲဆိုရင် သဘာဝနွားနို့နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်တာနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။ အ၀တ်စလေးကို ထောပတ်ထဲ နှစ်ပြီးရင် အဲ့ဒီအ၀တ်စလေးနဲ့ မျက်နှာကို သုတ်လိမ်းပြီး မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန့်ထားပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဒိန်ချဉ်ကိုလည်း အလားတူ နေလောင်ကွက်တွေရှိရာ နေ့တိုင်းလိမ်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ သိသိသာသာဖြူဝင်းလာမှာသေချာပါတယ်နော်။ အခုဖော်ပြပေးထားတဲ့ သဘာဝကုထုံးလေးတွေက လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး ငွေကုန်ကြေးကျလည်း မများတာမို့ အခုပဲ အိမ်မှာ အမြန်ဆုံးလုပ်ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
တငျးတိတျနဲ့ အမဲစကျတှကေို သဘာဝနညျးလမျးလေးတှနေဲ့ Bye Bye လုပျကွပါစို့
လူတိုငျးအတှကျ ခန်ဓာကိုယျမှာ သိသာထငျရှားတဲ့အစိတျအပိုငျးက မကျြနှာဖွဈတာမို့ မကျြနှာအသားရကေို တခွားအစိတျအပိုငျးတှထေကျပိုပွီး ဂရုစိုကျပေးဖို့တော့လိုပါတယျ။ ခရီးထှကျပွီးပွနျလာတဲ့အခါ တခြို့က Beauty Saloon တှေ ဒါမှမဟုတျ ခတျေမီအလှကုနျတှသေုံးကာ မကျြနှာမှာ ထှကျပျေါလာတဲ့ နလေောငျကှကျ ၊ တငျးတိတျ နဲ့ မှဲ့ခွောကျတှကေို ပွနျလညျပွုပွငျထိနျးသိမျးမှုတှလေုပျလရှေိ့ကွပါတယျ။ နလေောငျဒဏျခံထားရတဲ့ အသားအရကေို ပိုကျဆံမကုနျဘဲ သဘာဝနညျးနဲ့ ကုသလို့ရတဲ့ အိမျတှငျးကုထုံးလေးတှရှေိတယျဆိုတာ ပရိသတျတှအေတှကျ ဖျောပွပေးခငျြပါတယျနျော။
(၁) ရှောကျသီး (ဒါမှမဟုတျ) သံပရိုသီးကို အသုံးပွုလို့ရပါတယျ။ ရှောကျသီးမှာ အသားရကေို ဖွူအောငျ ခြေးခြှတျပေးနိုငျတဲ့ Citric Acid ပါဝငျတာမို့ ပရိသတျ တှအေတှကျ ဒီနညျးလမျးလေးက အသုံးဝငျမှာပါ။ အသုံးပွုပုံကတော့ ရှောကျသီးကိုညှဈပွီး ရလာတဲ့ အရညျကို နူးညံ့တဲ့အဝတျစလေးတဈခု နဲ့ မကျြနှာပျေါကို တို့ပေးပါ။ တဈပတျကို (၃)- (၄)ကွိမျခနျ့ ပုံမှနျလေး လုပျပေးမယျဆိုရငျတော့ မကျြနှာပေျေါမှာရှိတဲ့တငျးတိတျနဲ့ နလေောငျကှကျတှေ သိသိသာသာပြောကျကငျးသှားပါလိမျ့မယျနျော။
(၂) ကွကျသှနျနီနဲ့ မကျြနှာအသားရထေိနျးသိမျးရမယျဆိုရငျ အံ့သွသှားမလား. နလေောငျကှကျတှအေတှကျ ကွကျသှနျနီက တကယျကို ထိရောကျတဲ့ အိမျတှငျးကုထုံးတဈခုပါ။ ပြားရညျ နှဈဆနဲ့ လှီးထားတဲ့ ကွကျသှနျနီကို တဈဆ ရောစပျပွီး ရခေဲသတ်ေတာထဲကို ထညျ့ထားပါ။အခြိနျအတိုငျးတာတဈခုထိ ထားပွီးရငျတော့ အဲ့ဒါနဲ့ မကျြနှာအသားအရပေျေါ မလိမျးခငျမှာ ခန်ဓာကိုယျပျေါမှာရှိတဲ့ အမဲစကျတှကေို(၁၅)မိနဈခနျ့ အရငျဆုံးလိမျးနိုငျပါတယျ။ ဒီနညျးလေးကိုတော့ တဈပတျကို နှဈကွိမျထိ လုပျနိုငျပါတယျနျော။
(၃) ခရမျးခဉျြသီး ကို အသုံးပွုနိုငျတဲ့နညျးလမျးလေးကိုလညျး ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။ ခရမျးခဉျြသီးဟာ အသားအရကေို ဖွူဝငျးစနေိုငျတဲ့ ဓာတျတဈမြိုးပါဝငျတာကွောငျ့ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံမှာတောငျ ခရမျးခဉျြသီးကို အခွခေံပွီး ထုတျလုပျထားတဲ့ နာမညျကွီး အလှကုနျတှရှေိနတောပါ။ အသီးအနှံတှထေဲမှာ အစှမျးထကျတဲ့ခရမျးခဉျြသီးအစှမျးကိုတော့ လဈြလြုရှုထားလို့တော့မရပါဘူးနျော။ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ခရမျးခဉျြသီးတှနေဲ့ မကျြနှာပျေါက အမဲစကျတှရှေိရာ သုတျလိမျးထားပွီး (၁၀)မိနဈလောကျတော့ ထားပေးရမှာဖွဈပွီး တဈပတျကို (၃)-(၄)ကွိမျလောကျလုပျပေးလို့ရပါတယျ။
(၄) သဘာဝဆေးဖကျဝငျတဲ့ အဆီအနှဈတှထေဲမှာ မကျမနျးသီးမြိုးနှယျဝငျ မကျမှနျးသီးကနတေဈဆငျ့ရလာတဲ့ အဆီကလညျး နလေောငျကှကျတှနေဲ့ တငျးတိတျအမဲစကျတှကေို ကုသလို့ရပါတယျ။ မကျမှနျသီးအဆီမှာ Vitamins A ၊ B2 ၊ B6 ၊ D နဲ့ E အပွငျ အံ့အားသငျ့ဖှယျအစှမျးသတ်တိတှပေါဝငျနတောမို့ မကျြနှာပျေါမှာဖွဈစေ လကျပျေါမှာဖွဈစေ အမဲစကျတှရှေိရာကို အစကျလေးနှဈစကျခကြာ Lotion လိုပဲ လိမျးလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ရမေဆေးခပြဲည အိပျရာဝငျလိုကျပါ။ အိပျရာမဝငျခငျ ညတိုငျး ပုံမှနျလိမျးပေးမယျဆိုရငျတော့ တကယျ့ကို အစှမျးပွလာမှာသခြောပါတယျ။
(၅) ဒီနညျးလမျးလေးကတော့ လူတိုငျးသိပွီးသား အိမျတှငျးကုထုံးလေးဖွဈမှာပါ။ ဒိနျခဉျြ ၊ နှားနို့ စတဲ့ နို့ထှကျပစ်စညျးတှဟော အသားအရအေတှကျ ဘယျလောကျထိအထောကျပွုလဲဆိုရငျ သဘာဝနှားနို့နဲ့ ထုတျလုပျထားတဲ့ အလှကုနျပစ်စညျးတှကေိုကွညျ့တာနဲ့ သိနိုငျပါတယျ။ အဝတျစလေးကို ထောပတျထဲ နှဈပွီးရငျ အဲ့ဒီအဝတျစလေးနဲ့ မကျြနှာကို သုတျလိမျးပွီး မိနဈနှဈဆယျခနျ့ထားပေးသငျ့ပါတယျ။ဒါ့ပွငျ ဒိနျခဉျြကိုလညျး အလားတူ နလေောငျကှကျတှရှေိရာ နတေို့ငျးလိမျးပေးမယျဆိုရငျတော့ သိသိသာသာဖွူဝငျးလာမှာသခြောပါတယျနျော။ အခုဖျောပွပေးထားတဲ့ သဘာဝကုထုံးလေးတှကေ လှယျကူရိုးရှငျးပွီး ငှကေုနျကွေးကလြညျး မမြားတာမို့ အခုပဲ အိမျမှာ အမွနျဆုံးလုပျကွညျ့ဖို့မြှျောလငျ့ပါတယျ။